Wararka - Iimaan yar iyo iftiin yar, Bandhiggii Samafalka Fang Piano ee labaad ayaa si guul leh loo qabtay
Fiidnimadii Diseembar 31, 2020, riwaayaddii labaad ee samafalka oo ay si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen pianist Fang Yan iyo ururka samafalka "Dandangzhe Foundation" ayaa si guul leh loogu qabtay Hoolka Shirarka ee Xiamen Hongtai. Waxqabadka cajiibka ah ayaa soo jiitay indhaha dhagaystayaasha. Sacab ayaa dhacay. Xiamen Yuxin Diamond Tools Co., Ltd. iyo Huarui Culture waxay leeyihiin sharaf inay ka qaybqaataan kafaala qaadka.
Riwaayadan ma aha oo kaliya waxqabad piano oo saafi ah, laakiin sidoo kale waxqabad samafal. Sida riwaayaddii samafalka ee ugu horreysay, dhammaan dakhliga ka soo gala riwaayaddan (ka dib marka laga jaro kharashaadka wax -qabadka) waxaa loogu deeqi doonaa Fujian Dandangzhe Foundation, oo u heellan barnaamijka akhriska "Fasal walba wuxuu leeyahay Buug Dhinac", iyadoo la adeegsanayo muusigga, luqadda ugu quruxda badan, taageeraan akhriska tayada sare leh ee carruurta miyiga. Isla mar ahaantaana, tani waxay sidoo kale jawaab wanaagsan u tahay Guddiga Xisbiga Dowladda Hoose ee Xiamen iyo hindisaha Dowladda ee lagu dhisayo "Xiamen Jecel".
Marka lagu daro riwaayadda piano -ga, riwaayaddu waxay sidoo kale ku dari doontaa walxaha muusikada ka yar iyo kuwa kala duwan. Fang Yan iyo fannaaniin badan ayaa isla soo bandhigi doona. Isku darka piano, violin iyo qaababka farshaxanka kale ayaa ka dhigaya riwaayadan mid aad u kala duwan. Martidii ka soo qaybgashay bandhigga sida violin-ka da yar iyo madaxa kooxda heesaha dhalinta shiinaha (NYO-China) Xie Liyuan iyo pianist-ka da yar ee Li Guochao oo u dhashay dalka Jarmalka ayaa u keenay dhagaystayaasha xaflad muusik oo midabo leh.
Jacaylku wuxuu huriyaa jacaylka noloshuna waxay saamaysaa nolosha. Xiamen Yuxin Diamond Tools Co., Ltd. waxaa ka go'an inay siiso qalab dheemman oo tayo sare leh oo loogu talagalay shiidi shiidhka iyo suuq-geynta iyo si firfircoon u dhiirrigelinta horumarinta warshadaha dabaqa Shiinaha. Waxa kale oo ay si firfircoon u qaadaysaa mas'uuliyadda bulshada mustaqbalka. Yuxin wuxuu sii wadi doonaa inuu ka jawaabo baahiyaha bulshada, wuxuu ku biirin doonaa waxqabadyo dheeri ah ballanqaadyada samafalka dadweynaha, wuxuuna gaarsiin doonaa bulshada diirimaadka iyo kalgacalka xirfadleyda dabaqa ah
Suumanka Nadiifinta La -taaban karo, Birta Ku Xidhan Dheemannada Shiidi Kara, Kabaha Shiidi PCD, Kabaha Shiida Dheemanka, Trapezoids Kabaha Shiidi Dheemanka, Kabaha shiidi la taaban karo,